चुनाव हार्दैमा नेताले पाँच बर्ष पर्खनु पर्दैन : माधव नेपाल – Janata Times
काठमाडौं, भदौं २८ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले चुनाव हारेका नेतालाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु जायज भएको बताउनु भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता नेपालले चुनाव हार्दैमा नेताले पाँच बर्ष पर्खनुपर्ने तर्क अनुचित भएको बताउनु भयो ।
‘नेताले चुनाव हार्दैमा पाँच बर्ष पर्खनुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो, नेतालाई आवश्यकताले जहाँ पनि ल्याउन सकिन्छ,’ कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा नेता नेपालले भन्नुभएको छ । उहाँले चुनाव हारे पनि नेतालाई ल्याउन कुनै बाधा नहुने जिकिर गर्नुभयो । ‘चुनावमा त जीत हार भइरहन्छ, कुन ठुलो कुरा भयो र ? चुनावमा हारजीत भइरहन्छ, हार्ने बित्तिकै पाइदैन भन्ने कुरा गलत हो, चुनावमा टेक्निकल्ली हार्ने बित्तिकै जनताबाट पुरै अस्वीकृत भयो भन्ने ठान्नु हुँदैन, उस्को आवश्यकता के छ, नेशनले के महसुस गरेको छ ? तपाई जो सुकैलाई खोज्न त जाँदैनन नि । तपाईलाई बनाई दिनुपर्यो भनेर हुन्छ ? तपाई जतिसुकै टाउको फोडे पनि, रुए पनि, कराए पनि, कचिच्च्याए पनि दिँदैनन, तर किन खासखास नेतालाई दिन्छन त ?,’ नेपालले भन्नुभयो ।
उहाँले नेकपाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णय सही भएको र बिरोध गलत भएको बताउनु भयो । ‘भारतमा हेर्नाेस त । चुनाव हारे पनि तिनै ब्यक्तिलाई राज्यसभामा लिएर गएको छैन । अहिले बामदेव कमरेडको बारेमा जुन टिप्पणी भइरहेको छ, त्यो गलत हो,’ नेपालको भनाई छ ।
Related tags : चुनाव हार्दैमा नेताले पाँच बर्ष पर्खनु पर्दैन : माधव नेपाल
कोरोना भाइरसविरुद्ध चिनियाँ भ्याक्सिनको संसारमै आयो राम्रो नतिजा : परीक्षणमा देखिएन कुनै खरावी
कोरोना संक्रमणपछि होम आइसोलेसनमा बसेकी ८५ बर्षीया बृद्धाको मृत्यु
अमेरिकामा कोरोनाबाट संक्रमित संख्या ८ लाख नाघ्यो, एकैदिन २ हजार ८०२ को मृत्यु
फोटो फिचरमूख्य समाचारसूचना-प्रबिधि
बेल्चा लिएर प्रधानमन्त्री ओली आफै सुख्खा जमिन खन्न थालेपछि… (फोटो फिचर)